कांग्रेसमा देउवा इतरको समुहबाट गगन थापा निर्विकल्प महामन्त्रीका उम्मेद्वार ! - info4nepal
कांग्रेसमा देउवा इतरको समुहबाट गगन थापा निर्विकल्प महामन्त्रीका उम्मेद्वार !
काठमाडौंः गत साउन ९ गते कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले सार्वजनिक कार्यक्रममै युवा नेता गगन थापालाई मिलेर पार्टी जोगाउन आह्वान गरे ।
अहिले उक्त आह्वान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व देखि तत्लो तहको कार्यकर्ताबीच तातो बहसको रुपमा चर्चा पाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको आगामी १४ औ महाधिवेशनको दौड सुरु भइसकेको छ । भने नेताहरु जिल्ला दौडाहमा लागि सकेका छन् । १३ औ महाधिवेशनमा सवैभन्दा धेरै मत ल्याएर केन्दिय सदस्यमा निर्वाचित शेखर कोइराला सभापतिको दौडमा छन् ।
भने कोइराला परिवार भित्रैबाट महामन्त्री डा. शशांक कोइराला पनि सभापतिमा लड्ने संकेत गरेका छन् । यद्यपी शशांकले शेखर, सुजता र आफु मध्ये एक जना सभापतिको उम्मेदवार हुने बताएका छन् ।
यता देउवा समहूमा भने त्यतिधेरै विवाद छैन । देउवा चुनाव नलडेको खन्डमा विमलेन्द्र निधी सभापतिका दावेदार हुन् । निधी पनि आन्तरिक रुपमा देउवा भन्दा आफू सभापति लड्नुपर्नेमा लविङ तिव्र पारेका छन् ।
कुन समूहमा जाने भन्नेमा विजयकुमार गच्छादारले टुंगो लगाएका छन् । पार्टीनै समाहित गरेका गच्छादारको सहयोग पनि महाधिवेशनमा निर्णायक हुनसक्छ ।
देउवा नजिक देखिएका गच्छादारले आगामी दिनमा लिने निर्णयले पार्टी भित्रको आन्तरिक समिकरणमा ठुलै प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
देउवाइतर समूहमा सभापतिको दावेदार धेरै देखिएपनि महामन्त्रीमा भने गगन थापा सर्वसम्मत उम्मेदवारको रुपमा देखिएका छन् ।
गत महाधिवेशनमा करिव ६ सयमत ल्याएका थापा महामन्त्रीका सवैभन्दा बलिया उम्मेदवार हुन् ।
यता देउवा समूह पनि युवा उम्मेदार उठाउने योजनामा रहेको छ । प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँड वा विश्वप्रकाश शर्मा मध्ये एक उम्मेदवार बनाएर जाने तयारीमा लागेका छन् ।
यता शेखर कोइराला र गगन थापाबीच बाक्लो कुराकानीले नयाँ टिम जन्मिन सक्ने आंकलन समेत गरिएको छ ।
तर देउवाइतर टिममा धेरै आकांक्षी देखिएपनि देउवालाई हराउन एकै ठाँउमा उभिनुको विकल्प नभएको भन्दै आंकक्षीबीच छलफलहरु तिव्र पारिहेको एक नेताले जानकारी दिए ।
‘कुनै पनि बाहानमा पुनः देउवालाई पार्टी सभापति बनाउनु भनेको कांग्रेसको दुर्भाग्य हुने छ, रोक्न हामी एक ठाउमा हुन्छौ,’ ति नेताले भने ।
‘देउवाको चुनौती चिर्न शेखर समूहले पौडेल, सिंह, सिटौला र थापाहरूको युवा जमातलाई एकैठाउँ ल्याउन सक्नुपर्छ ।
पौडेल, शेखर, सिंह जोसुकै सभापतिका लागि लडे पनि देउवाइतरको निर्णायक समूहलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्नेमा ती नेताले जोड दिए ।
सम्झना राई बनिन् कोरियाका पहिलो नेपाली प्रहरी
रवि लामिछानेलाई दिपक राज गिरीको साथ
‘नेपाली कांग्रेसले कम गर्न दिएन , अबरोध मात्र खडा गर्यो – प्रम ओलि
शिक्षकहरुलाइ चुनौती , अब पुराना शिक्षाक यसकारन हटाउन पर्छ…..